Maskila amin'ny fitomboan'ny volom-borona
Lamina lava lava sy mihosotra no nofinofy vehivavy maro izay mahafantatra fa maro no miankina amin'ny fomba fijery. Raha misy vehivavy manana fehiloha fohy sy malefaka dia avy hatrany dia misy olana maro: aloha, mila mitady ranomainty izay handrakotra ny lava lava volo, ary raha ny marina dia matetika ny mascara toy izany malemilemy, mandatsaka sy miondrika mandritra ny andro. Faharoa, amin'ny felam-pahefana fohy dia tsy manintona be toy ny amin'ny volom-bolo lava. Ary amin'ny farany, fahatelo dia manome ny endriky ny charisma ny volom-bolo, satria amin'ny alalan'ny fijerena maso, vehivavy dia afaka maneho ireo fihetseham-po izay tsy azo lazaina amin'ny teny, ary maneho azy ireo tsaratsara kokoa amin'ny maso izay oram-batravatra dia firavaka, tsy misy hadisoana.
Ary raha ny natiora dia tsy nanome taminao lava lava, azonao atao ny mamitaka azy - mampiasa masks ho an'ny fitomboana haingana. Hanampy amin'ny fanamafisana ny volomaso izy ireo, hampihetsika ireo metabolic processions ao amin'ny follicles, ary hitondra anjara biriky amin'ny fampiatoana ny fitomboana.
Saron-trano ho an'ny fitomboan'ny akanjo lava
Anisan'ny arsenalin'ny saribakoly ao an-tokantrano, ny fahombiazan'izy ireo dia asehon'ireo izay mifototra amin'ny vitamina, ary koa ireo izay ampiasaina amin'ny menaka.
Mason-damosina amin'ny vinaingitra
Ny vitaminina dia zavatra azo avy amin'ny "biriky" ho an'ny tavy. Mba hanamafisana kokoa ny volom-bolo, tongotra vitaminina A sy E ao amin'ny pharmacy. Tsy atao am-pisakafoanana izy ireo, fa raha ampiharina dia tsy haharitra ela ny valiny.
Ireo vitamina ireo dia hampitombo ny elasticity ny volom-borona, hampatanjaka ny tehiny sy ny fakany. Ny fanaovana manga mifototra amin'ny vitamina, matetika dia mampiasa ny menaka izy ireo ho fototra iray izay mifangaro ireo singa fototra mavitrika.
Hanomana sarontava izay azo ampiasaina imbetsaka, dia makà:
1 teaspoon dibera shea; Mahagaga izany, ary amin'ny voalohany dia toa tsy ho azo atao ny mampifangaro azy amin'ny toeran'ny rano;
Vitamins A sy E koa - ao amin'ny toetry ny rano;
Mitadiava vata kely iray mba hametrahana solika sy vitamina.
Avy eo dia manomàna ilay sarontava:
1 tsp Nataonay tao anaty boaty iray ny menaka kariana.
Ao amin'io fitoeran-javatra io ihany, dia manindrona 5 vitaminina vitaminina E sy vitamin A (any no azonao ampiana ranom- boankazo 5 - misy vitaminina B, izay tena ilaina amin'ny volo).
Avy eo, ao anaty rano fandroana, manadio ny solika amin'ny vitamina ary mifangaro tsara, rehefa misy ranon-tsolika.
Ny dingana farany dia ny fametrahana ny fitoeran-tsakafo amin'ny saron-tava mandritra ny adiny iray ao amin'ny vata fampangatsiahana, ka mbola manana fiantohana mafy izy.
Ny saron-tava dia tokony ampiharina amin'ny volom-bolo eo anoloan'ny fandriana miaraka amin'ny fanampian'ny rantsantanana, mandritra ny iray volana, tsy misy fivoahana. Ny fiantraikany dia ho hita ao anatin'ny 3-4 andro.
Maskina mahomby amin'ny fitomboan'ny akanjo lava
Ny saron-tava tsotra nefa mahomby ho an'ny fitomboan'ny volom-borona sy ny volomaso ary ny volom-borona dia ny mampihatra solika tsy azo ampiasaina. Raha mampiasa boseta ianao amin'ny fampiharana izany amin'ny volonao, dia mety handratra ny masonao izany ary hampihena ny fahitana anao. Raha mampiasa ny endriny sy ny ankibenao amin'ny toeran'ny borosy ianao ary manosotra ny solika ao amin'ny volom-bolo amin'ny hetsika masaka, dia tsy hianjera eo amin'ny masony izy ary ho tsara kokoa amin'ny volom-borona.
Ampiasao ity masira ity alohan'ny hatory, isan'andro. Ny vanim-potoana fampiasana ny saron-tava dia tsy voafetra - ho tena ilaina ho an'ny volom-bolo izany, raha toa ka ity fomba fitsaboana ity dia ampahany amin'ny fikarakarana isan'andro.
Azo atao ve ny mandoto ny fako miaraka amin'ny mascara?
Ahoana no hanaisotra ny trompetra ao an-trano?
Manafina ny hoditry ny tarehy ao an-trano
Ny pimple anatiny amin'ny tarehy - ahoana no fialana?
Ny hoditra madio amin'ny tarehy
Maskin'ny hoditra maina
Kofehy na elingina: jereo ny singa misy rafitra roa
Ny fampiasana mandarin ho an'ny vatana ary ny fahaverezan'ny lanjany
Taom-baovao tany Provence
Ny rafitry ny tranonjaza
Akn amin'ny saka
Valio amin'ny tananao
Fanavakavahana aorian'ny fiterahana
Inona no laminasa tsara kokoa ho an'ny lakozia?
Miondrika amin'ny vehivavy
Provence style eo afovoan'ny efitrano fandriana
Ny fanaintainana eo amin'ny sandriny ankavanana
Fortune-milaza amin'ny Shrovetide
Mpandrindra ny tsinay - soritr'aretina